रुस्लान डिपिएल ३ – दाबेदार मध्येको एक लक्की रुपन्देही ! | Hamro Khelkud
रुस्लान डिपिएल ३ – दाबेदार मध्येको एक लक्की रुपन्देही !
धनगढी (हाम्रो खेलकुद) – घरेलु फ्रन्चाइज लिगमध्ये सर्वाधिक पुरस्कार राशीको रुलान धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) ३ शनिबार फाप्ला क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ । डिपिएलमा ६ शहरका फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
प्रतियोगिता सुरु हुँदा सबै टोली उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ उत्रनेछन् । रुपन्देही च्यालेन्जर्स पनि उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ धनगढी पुगिसकेको छ । डिपिएलको ट्रफी शुक्रबार सार्वजनिक भई सकेको छ ।
रुपन्देहीले अक्सनमा अन्य टिमको तुलनामा राम्रा खेलाडी पाएको थियो । गोलाप्रथामा भीम सार्की र विनोद भण्डारीलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको थियो । यस पटक रुपन्देहीलाई बलियो मध्येको एक र उपाधि दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ ।
रुपन्देहीका मुख्य तीन खेलाडी
भीम सार्की – युवा खेलाडी भीम रुपन्देहीका प्रमुख खेलाडी हुन् । हालै नेपाली टोलीको संयुक्त अरब इमिरेन्ट्स (युएई) भ्रमणमा १६ सदस्यीय टोलीमा समेटिएपनि डेब्यू गर्ने अवसर पाएनन् । तर पछिल्लो समय घरेलु लिगमा उनको प्रर्दशन उत्कृष्ट रहँदै आएको छ ।
विनोद भण्डारी – हार्ड हिटर विनोदको पछिल्लो समय घरेलु र सिनियर टिममा सन्तोषजनक प्रर्दशन भइरहेको छैन । तर पनि विनोद आफ्नै लयमा फर्किए भने उनलाई रोक्न जो कहि बलरलाई कठिन हुन्छ ।
एकै ओभरमा विनोदले खेललाई नयाँ मोडमा पुर्याउन सक्दछन् । विशेष गरेर विनोदले तल्लो क्रममा आक्रमक ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । पछिल्लो समय ओपनरको रुपमा पनि भुमिका निर्वाह गरेका छन् ।
बाबर हायत – हङकङका पूर्व कप्तान बाबर हायत पनि रुपन्देहिका महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् । पछिल्लो समय बाबरले नेपाली घरेलु लिगमा सानदार प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । विषेश गरेर ठूला ठूला शर्ट प्रहार गर्न माहिर बाबर दवावमा पनि राम्रो रन बटुल्ने गर्दछन् ।
रुपन्देहीमा धेरै राष्ट्रिय र घरेलु लिगमा सानदार प्रर्दशन गरिरहेका खेलाडी छन् । प्रदीप ऐरी, तीव्र गतिका बलर ललितसिंह भण्डारी पनि रुपन्देहीमा छन् । त्यस्तै कृष्ण कार्की, विक्रम शोब, सुमित महर्जन र सन्दीप सुनारले पनि खेल जिताउने क्षमता राख्छन् ।
युवा खेलाडी शेर मल्ल र अनिल खरेलले पनि आफुलाई यसै प्रतियोगितामार्फत स्थापित गर्ने प्रयासमा हुनेछन् । त्यसैले स्वभाविक छ हरेक खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न हरप्रयास गर्नेछन् ।
रुपन्देही – बसन्त रेग्मि –कप्तान), भीम सार्की, ललित भण्डारी,प्रदिप ऐरी,विनोद भण्डारी,सन्दिप सुनार ,विक्रम सोब,कृष्ण कार्की ,सुमित महर्जन,पुरन बिक ,सुरज दराई, अनिल खरेल, शेर मल्ल
बाबर हायत (हङकङ), राजा अलि डर (पाकिस्तान)